Ciidamada Kenya iyo kuwa DFKM oo lagu weeraray Deegaanka Ceelcad ee gobalka Gedo
April 27, 2012 - Written by
Gedo:-Dagaalo xoogan ayaa maanta mar kale waxaa uu ka dhacay deegaanka Ceel cade oo ka tirsan gobalka Gedo waxaana dagaalka uu dhexmaray ciidamada huwanta ah iyo kuwa Al-Shabaab dagaalka ayaa waxaa guulo ka kala sheegtay labada dhinac.
Afhayeenka howlgalada ee Ururka Al-Shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab ayaa sheegay in ay fashilliyeen duulaan ay rabeen ciidamada dalka Kenya oo daba ka riixaya ciidamo daacad u ah DFKM wuxuuna sheegay in ay khasaaro xooggan gaarsiiyeen.
Abu Muscab ayaa sheegay sidoo kale in gubeen gawaari nuuca tiknikada ah oo ay wateen ciidamada DFKM ayna dileen askar ka tirsan DFKM .
Afhayeen u hadalay ciidamada DFKM oo lagu magacaabo Diyaad Cabdi kaliil ayaa sheegay in dagaalkii maanta dhacay deegaanka Ceelcad ay guulo ka gaareen wuxuuna ku faanay in ay khasaaro gaarsiiyeen ciidamada Al-Shabaab waloow uu qiray in askar ka tirsan DFKM uu khasaaro soo gaaray.
Deegaanka Ceelcad oo aan waxbadan ka fogeyn degmada Garbaharay ayaa waxaa ka dhaca dagaalo u dhexeeya ciidamada huwanta iyo kuwa Al-Shabaab iyada oo dhowr mar ay diyaaradaha dagaalka ee dalka Kenya ay duqeyn ka geysteen.